Maleeshiyada Shabaab oo dishay sarkaalkii faransiis ahaa | Radio Muqdisho
Maleeshiyada Shabaab oo dishay sarkaalkii faransiis ahaa
Published on January 17, 2013 by admin · No Comments · 3,240 views
Maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa sheegtay in ay dishay Denis Allex oo ahaa sarkaal faransiis oo ay heysteen tan iyo sanadkii 2009-ka, ayagoo ka jawaabaya weerarkii ay ciidamada Faransiisku ku qaadeen tuulada Buulo Mareer oo ay ku tuhunsanaayeen.
Kooxda Al-Shabaab ayaa bogga Twitterka ku baahiyay in ay toogteen sarkaalkan oo ka tirsanaa sirdoonka faransiiska maalintii arbacada shalay, ayagoo maalmo ka hor ku goodiyay inay dili doonaan markii uu Faransiisku howlgal ciidan oo uu ku soo furan rabay ka sameeyay gobolka Shabeelaha Hoose.
Dowladda Faransiiska ayaa sheegtay inay rumeysan tahay in Mr Alex la dilay intii uu socday howl galkii todobaad ka hor ay cidiamada Faransiisku ka sameeyeen degaanka Buulo Marer oo ay ku dhinteen laba askari oo ka tirsan ciidamada Faransiiska.
Maalintii Jimcaha ayaa qiyaastii 50 ka tirsan ciidamada kummaandooska Faransiisku weerar loo adeegsaday diyaaradaha qumaatiga u kaca ku qaareen Buulo Mareer oo ay rumeysnaayeen in lagu haayo mr. Allex oo muddo dheer gacanta ugu jiray maleeshiyaadka Shabaab.
Fransiiska ayaa sheegay in howlgalkaas ay ku dileen 17 ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab, dagaalkaas oo ay dad goob joogayaal ah ay ku sheegeen in uu socday wax ku dhow hal saac, ayna ku dhinteen dad rayid ah.
Maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa tilmaamay in sarkaalkan uusan ku sugneyn Buulo Mareer xilliga ay howl galka sameynayeen ciidamada Faransiisku. maalintii isniinta ayay maleeshiyaadka Shabaab soo daabaceen sawirka askari ka tirsan ciidamada faransiiska oo ku dhintay howl galka.